कोरोनाभइरस : अमेरिकी कम्पनीले बनाएकाे खाेप सफल, इजरायलले खरिद गर्दै ! – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /बिज्ञान प्रबिधि/कोरोनाभइरस : अमेरिकी कम्पनीले बनाएकाे खाेप सफल, इजरायलले खरिद गर्दै !
इजरायलले अमेरिकी औषधी कम्पनी मोर्डर्नाबाट यसको देशका मानिसहरूलाई कोरोना भाइरसबाट जोगाउन खोप लिन तयारी गरिरहेको छ। इजरायली सरकार कम्पनी संग अन्तिम वार्ता मा छ। यो जानकारी इजरायली मिडिया इन्स्टिच्यूट वाईनेट द्वारा दिइएको थियो। इजरायली स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसबारे कुरा गर्न अस्वीकार गरेको छ, तर YNET मिडियाले यस समाचारलाई प्रख्यात बनाएको छ। अर्कोतर्फ, मोडर्नाले पुष्टि गरे कि उनले जुलाईमा नयाँ खोपको क्लिनिकल परीक्षण 30 हजार भन्दा बढी मानिसहरूलाई गर्ने छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्थित बायोटेक्नोलोजी कम्पनी मोर्डर्ना थेरापीटिक्सले एउटा खोप विकास गरिरहेकाे छ जसले मानव रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई कोरोना विरुद्ध लड्न प्रशिक्षण दिन्छ। यस खोपले कोरोना भाइरसलाई शरीरमा फैलनेबाट रोक्दछ। यसको लागि, मानव शरीर मा कमजोर र लगभग निष्क्रिय भाइरस राख्न को लागी तयार छ, ताकि शरीर प्रति प्रतिरोधात्मक क्षमता को विकास हाेस् ।
यसको लागि कोरोना भाइरस प्रयोग भएकाे छैन। यसका लागि वैज्ञानिकहरूले कोरोनाको आनुवंशिक कोड तयार गरेका छन्। यसको एक सानो भाग सुईको सँगै शरीरमा घुसाइनेछ। जस पछि उसले कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नेछ। हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि वैज्ञानिकहरुका करीव 98 टोलीहरु संसारभरि कोरोना भाइरस कोभिड 19 भ्याक्सिनका लागि काम गरिरहेका छन्। सबै बिभिन्न स्तरमा पुगेका छन्। तर ती मध्ये केवल। छन् जो आफ्नो लक्ष्यको नजिक छन्। जुन मानव परीक्षण भनिन्छ। ती मध्ये एक खोप पनि छ।
सम्पूर्ण संसार कोरोना भाइरसबाट क्षतिग्रस्त छ। व्यक्तिहरूलाई सब भन्दा कडा उपचारको आवश्यकता छ। कोरोना भाइरसलाई नष्ट गर्न धेरै प्रकारका प्रयोग भइरहेका छन्। खोपको बारेमा, औषधि र प्रतिरक्षाको बारेमा। तर हालसम्म कसैले पनि खोप कहिले तयार हुन्छ भनेर बताउन सकेको छैन। यो कुन खोप हुनेछ, जसले व्यक्तिलाई निको पार्छ। जसले सम्पूर्ण विश्वलाई कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बचाउनेछ।
महावीर पुनले यसरि बनाउँदै छन् कोरोना आशंकित जाँच्न कोरियाली मोडलका बुथ भिडियो